China Homogeneous ESD Vinyl Floor fekitari uye bhizimisi | Linsu
ESD homogeneous vinyl pasi ine zvachose anti-static basa nekuti inoshandisa inofambisa static network yakaumbwa pakatarisana nemapurasitiki pamwe neyakajairika homogeneous vinyl pasi kuita senge isina mvura, murazvo unodzora, pfeka nemishonga, kurira kwezwi, kemikari kuramba etc.
1. ESD homogeneous vinyl pasi ine zvachose anti-static basa nekuti inoshandisa inofambisa static network yakaumbwa pakatarisana nemapurasitiki epasi pamwe neyakajairika homogeneous vinyl pasi kuita senge isina mvura, murazvo unodzora, kupfeka kusagadzikana, kurira kwezwi, kemikari kuramba etc.
2.PVC anti-static yakarovera pasi, kana yakaiswa pasi kana kubatana kune chero yakaderera mikana poindi, inogonesa iyo yemagetsi kubhadharisa kudzima. Iyo inoratidzirwa nekupokana pakati pegumi nemaviri simba uye 10 9th simba ohm. PVC anti-static yakarovera pasi inogadzirwa ne polyvinyl chloride resin semuviri mukuru, mapurasitiki, zvinodzikamisa, mafirita, zvinhu zvinoitisa uye zvinobatanidza vamiririri zvinogadzirwa nesainzi kuenzanisa, polymerization uye thermoplastic kuumba maitiro, uye iko kusangana pakati pePVC zvidimbu kunoumbwa Static magetsi network, ine zvachose anti-static basa. Pasi panoratidzika semarble uye ine yakanaka yekushongedza maitiro. Inokodzera kuterevhizheni, microelectronics, zvemagetsi indasitiri chirongwa-inodzorwa makomputa makamuri, makomputa makamuri, network pasi, utsanana uye dzimwe nzvimbo panoshanda zviridzwa nemidziyo. Iyo inoitisa zvinhu ndeye nano zvinhu zvine kugadzikana kuita. Iyo inoitisa zvinhu inoyerera yakananga kubva kumusoro kwepamusoro kusvika kune yepazasi nzvimbo. Ichi chimiro chinotara kusingaperi kweanopokana-kusamira kuita; iyo yepasi zvinhu ndeyeyakaomeswa-yakaoma PVC zvinhu, izvo zvine hunhu hwekupfeka kuramba, murazvo kudzora uye kusatsvedza, Sangana nezvinodiwa zvekushandisa kwenzvimbo dzakasiyana siyana dzeveruzhinji-dzinoyerera nzvimbo, ine yakanaka compression kuramba; Iyo mhando nyowani yemwenje-yemuviri pasi yekushongedza zvinhu izvo zvinozivikanwa kwazvo pasirese nhasi, inozivikanwa zvakare se "mwenje-muviri pasi zvinhu". Zvakanakira zvePVC anti-static yakazvimoneredza pasi zvinhu Nzvimbo dzakanaka, dzinogona kupa akasiyana mavara kune vashandisi kusarudza; kusununguka, rutsoka rwakanaka kunzwa; pfeka kuramba, yakaderera guruva chizvarwa, kumanikidza kuramba uye murazvo unodzora; ngura nemishonga, simba asidhi nemishonga, simba alkali nemishonga. Chigadzirwa chacho chakaedzwa anti-static performance usati wabva mufekitori uye unosangana nemhando dzehunhu.
2m * 20m homogeneous vinyl mupumburu
6mm * 6mm yakafanana vinyl tile
Izvo zvigadzirwa zvinogadzira zvivakwa zvakaedzwa isati yatanga uye mushure mekugadzirwa, mukuteerera nemhando yepamusoro.
Kupisa GB 8624-2012 kirasi Bl
Slip kuramba ZVINOKOSHA 51130 boka R9
Dynamic coefficient yekukwesana EN 13893 kirasi DS
makirogiramu / m2kg / ㎡
Hapana Stain 0
23 rinorema basa
34 rinorema basa
43 rinorema basa
Underfloor Heating Chemical Nemishonga
Anti-static floor inoshandiswa zvakanyanya kumakamuri emagetsi emakomputa, makamuri akachena, makamuri ekuchinjana ari kure, indasitiri yekugadzira emagetsi zvigadzirwa, mashopu e microelectronic indasitiri, makamuri easepsis, makamuri ekudzora epakati, uye mashopu anoda kucheneswa uye humbowo hwemagetsi. Ikozvino yave kushandiswa zvakanyanya mumabhangi, posvo mahofisi, njanji, mushonga, uye maelectronic maindasitiri.
600000 mativi emamita akamira mumatura, 24000 mativi emamita kugadzirwa kwezuva nezuva.
Yedu flooring yakarongedzwa zvakanyatso, kuona kuti nhumbi dzinounzwa mune yakanaka mamiriro.
Inoitisa ESD pasi inofanirwa kuiswa paSub pasi iyo yakaenzana, yakatsetseka uye isina mitswe, Residual humibity inofanira kunge iri pasi pe2.5% kuyedzwa neCM Dumb bvunzo. Matiles, adhesive uye yekuisa saiti inofanirwa kusvika panosvika tembiricha inokwana gumi nemasere maawa makumi maviri nemasere isati yaiswa.uye namatidza mataira ane anokwanisa conductive glue pazasi pe10 ohm kuti uwane rumwe ruzivo nezve nzira dzekuisa.
Pashure: Tianshan pvc vinyl pasi
Zvadaro: Ximalaya PVC chipatara vinyl pasi